Nhau - Mutengi Akagamuchira Machina Ake
Mutengi akagamuchira yake yekumucheto banding muchina, wepanha saw, muchina unopisa muchina uye bhendi saha. Uye ndakaisa michina zvinobudirira！
Chinangwa chikuru chetafura inotsvedza ndeyekuona mahwendefa akakura-mafomati (substrates) mumahwendefa akasiyana anosangana nezvimwe zvirevo uye kunyatso kudiwa. Iko pamusoro peaya makuru-fomati substrates anogona kunge asina kupendwa kana kupendwa. Kazhinji, saizi yematanho eplate mushure mekuchekwa netafura yekutsvedza yakaona, uye iyo sawing pamusoro yakati sandara uye yakatsetseka, uye inogona kupinda mukutevera maitiro (senge kumucheto bhandi, nezvimwewo) pasina kumwe kupedzisa.
Kuveza huni inotsvedza tafura macheka ane mobile workbenches anoshandiswa zvakanyanya, kwete chete kune akapfava uye akaoma huni, plywood, fiberboard, particleboard, uye rimwe kana mativi ese akafukidzwa ne-veneer, bepa, plastiki, isina-ferrous simbi kana wakisi-yakavharwa veneer, nezvimwe. , Horizontal kana angled sawing yekuwana mapaneru ane zviyero zvinosangana nezvinotsanangurwa; panguva imwechete, inogona zvakare kushandiswa kucheka akasiyana epurasitiki mapaneru, anodzivirira mapaneru, matete aruminiyamu mapaneru uye aluminium profiles; mimwe michina maturusi akave akashongedzerwa nekugaya zvigadzirwa, izvo zvinogona kuve Kugadziriswa kweiyo grooves nendimi uye maburi ane hupamhi hwe30-50mm. Panguva yekugadzirisa, iyo workpiece inoiswa pane yakasundirwa worktable, kuitira kuti iyo yekushandira ikwanise kuona iyo yekufambisa kufamba, iri nyore kwazvo.
Woodworking edge banding muchina unokodzera yakatwasuka kumucheto banding uye kucheka kwepakati density density fiberboard, blockboard, yakasimba huni bhodhi, chidimbu bhodhi, polymer musuwo jira, plywood, nezvimwe. Inogona kuve nekaviri-mativi ekunamatira kumucheto mabhandi panguva imwe chete, nekucheka kumucheto banding, uye namira bhendi. Nemabasa akaita sekuumbana, kusimudza, kumenya, kugera zvakashata, kutema kwakanaka, kukwenya uye kukwiza, iyo yekumira yekumusoro haina kusimba, inotsvedzerera, uye inonzwa zvakanaka, uye tambo yekuisa mucheka yakatwasuka uye yakatsetseka.
Muchina wekudhinda unopisa unoshandiswa kwechipiri kugadzira machira emidziyo yekugadzira fenicha, matanda ekugadzira masuo, uye mapango-akavakirwa pamatanda. Ndiyo imwe yemishini huru yekuveza michina. Inonyanya kushandiswa kupisa-kudzvanya uye kubatanidza fenicha mapaneru, kuvaka zvikamu, madhoo ehuni, uye madhoo asingatsvi nemoto. , Inonyanya kushandiswa plywood, huni hwakajeka, chidimbu chebhodhi, MDF, zvakasiyana-siyana zvekushongedza, jira rekushongedza, veneer, PVC, nezvimwewo, uye zvinogona zvakare kushandiswa kuomesa kwekuomesa, kuenzanisa, uye kuyera kwemavara machipisi ehuni. Stereotype, maitiro acho anoshamisa.
Post nguva: Jun-21-2021